Akukho mntu ubona ukucothayo nokucothayo
Nguwo umphefumlo uphuma kubunzulu bobomi
I-Ascnds,-ngaphandle, imitha, xa ikhululekile,
Ngokufa ngakunye okutsha siyakubona umva
Imbono ende yohlanga lwethu
Izinto ezininzi zethu zangaphambili ezi-livcs zomkhondo.
Vol. 1 JANUWARI, 1905. 4
Ilungelo lokushicilela, i-1905, nguHW PERCIVAL.
IINGXAKI ezininzi ezikhathaza ingqondo yomntu, azikho ezibanga iingxaki ngakumbi kunemijikelezo okanye ukuphindaphinda kweziganeko ezithile.
Abantu bakudala babezama ukwazi umthetho wemijikelezo ukuze bavisisane nobomi babo. Kula maxesha ethu amadoda afuna ukufumana umthetho we-cyclic wokuba anokuqhuba ishishini lawo ngenzuzo. Ngawo onke amaxesha abantu bazamile ukufumana umthetho weemijikelezo kuba ngolwazi olunjalo banokulandela imisebenzi yabo yezolimo ngokuqinisekileyo, iwadi yobhubhani, iindyikitya zokufa, kunye nokubonelela ngokuchasene nendlala; ukuxela kwangaphambili ngemfazwe, izaqhwithi, ukuphazamiseka kwenyikima, kwaye kulumkele ukuchasana nengqondo; Yazi unobangela wokuzalwa, ubomi, ukufa, kunye nemeko elandelayo; kwaye basebenza ngamava exesha elidlulileyo, banokucacisa iziganeko zexesha elizayo ngokuchanekileyo.
Umjikelo wamagama uthathwe kwigama lesiGrike elithi "kuklos," elithetha umsesane, ivili, okanye isangqa. Kwindlela ebanzi yomjikelezo linyathelo kunye nokuphendula kwezenzo ezivela kwiziko, uhlobo kunye nexesha lomjikelezo olulinganiswa sisalathiso kunye nokuphembelela kweentshukumo njengoko zisuka zibuyele kumthombo wazo. Ukuphela komjikelo omnye okanye isangqa sisiqalo somnye, ukuze intshukumo ibambe umoya, njengasekuhambeni kohambo lwentambo okanye ukutyhilwa kweetapile zerhasi.
Imijikelezo ingahlulwa ibe ziiklasi ezibini ezibanzi: ezo ziyaziwayo kunye nezo zizifundo zokuqikelela. Phakathi kwezo siqhelene kakhulu nomjikelo wosuku, xa umhlaba wenze inguqu epheleleyo epheleleyo ejikeleze i-axis yayo kwiiyure ezingamashumi amabini anesine; umjikelezo wenyanga enyangeni, xa inyanga yenze uguquko olunye emhlabeni emhlabeni ngeentsuku ze-28; umjikelezo wonyaka, xa umhlaba ugqibe ukuguqula imeko enye ujikeleze ilanga kwaye ilanga lenze inguqu enye ngemiqondiso ye-zodiac, ixesha elimalunga neentsuku ze365; kunye nonyaka osecaleni okanye umjikelo wokuthathwa kwendawo yokuxinana xa isibonda sesikhombisi sele sijikeleze isibonda se-ecliptic kwiminyaka ye-25,868.
Ngumbandela wolwazi oluqhelekileyo ukuba ukusuka kuhambo olubonakalayo lwelanga ngokuhamba kweenkwenkwezi, sifumana amaxesha ethu amane: intwasahlobo, ihlobo, ukwindla kunye nobusika, nganye iqhubeka ixesha elingaphezulu kweenyanga ezintathu, kwaye Ezi nyanga zahlula-hlulwe ngokweekota ezine kunye neqhezu, ikota nganye yenyanga ibe sisigaba senyanga njengekota yokuqala, inyanga epheleleyo, ikota yokugqibela, kunye nenyanga entsha. I-zodiac liwotshi enkulu yecala, ilanga nenyanga izandla zalo ziphawula amaxesha. Emva kwe-zodiac siye saqulunqa isazinge sendalo esinempawu ezilishumi elinambini; ezi zinto ziphawula ukukhanya kunye namaxesha amnyama ngemini ezimbini kwiyure ezilishumi elinambini.
Umxholo obangela umdla kwi -istatistist kunye nembali kukubonakala komjikelo weentsiba, izibetho, indlala, neemfazwe; imbonakalo yokujikeleza kunye nokunyamalala kohlanga, kunye nokukhula okuphindaphindiweyo nokuwa kwempucuko.
Phakathi kwemijikelezo nganye kukho umjikelo wobomi oqhubeka ngoku usiya kumhlaba ujikeleze amagumbi omoya wemiphunga, apho usebenzisa igazi njengemoto yalo ohamba ngethambo le-pulmonary ukuya kwi-auricle yasekhohlo, I-ventricle yasekhohlo, ukusuka apho idlula khona i-aorta isasazwe kuwo onke amalungu omzimba njengegazi elingelolomntu. Ubomi obukhoyo ngoku kunye neeseli zobomi babuyela kwi-capillaries ukuya emithanjeni, ukusuka apho kwi-venae cavae ukuya kwi-auricle yasekunene, ukusuka apho ukuya kwi-ventricle yasekunene, kwaye ukusuka apho nge-pulmonary artery ukuya emiphungeni, apho, ihlanjululwe, iba ngumthwali wobomi emzimbeni, umjikelo opheleleyo ohlala imizuzwana engamashumi amathathu.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo yonke imijikelezo kuthi yile nto ebandakanywayo yangaphambi kwendalo, ukuzalwa, ubomi kweli lizwe, ukufa, kunye nasemva kokusweleka. Ukusuka ekutyhilekeni kwalo mjikelo, ulwazi lwayo yonke eminye imijikelezo luya kulandela. Sikholelwa ukuba kuphuhliso lwangaphambi kwendalo yomntu imbali yonke yomhlaba wethu ibekiwe.
Umzimba womntu ubunjwe ukuba usebenze ixesha elithile, umjikelo wobomi bawo. Kweli xesha, iminyaka edlulileyo kubomi bomntu ihlala iphindwe ngumntu. Ke ivili lobomi liguqukela kumjikelo wokufa.
Kungenxa yemijikelezo yokuzalwa neyokuphila nokufa eyachaphazeleka ziintanda-bulumko zamandulo, kuba ngolwazi lwazo zinokuthi zidlule zingene nakuloo mgqomo uphuma kuwo, kuthiwa, akukho mntu ubuya umva. Injongo yophuhliso lwangaphambi kokuba yindalo ukutsala izinto zomhlaba kwindalo enye, ukubumba zibe yimilo yomntu, enika elona thuba likhulu lamava kumgaqo okrelekrele, nengqondo, okokuhlala emzimbeni womntu. Ngengqondo injongo yobomi kukufumana ulwazi malunga nolwalamano lwendalo iphela, ngalo kwaye ngelixa usemzimbeni, ukwenza imisebenzi elandela olo lwazi, kunye nokwakha kwikamva ngamava exesha elidlulileyo.
Ukufa kukuvala, ukuphonononga kunye nokulinganisa umsebenzi wobomi, kunye neendlela zokubuyela kwihlabathi leengcinga ezizezelizwe. Sisango apho umphefumlo ubuyela endaweni yawo.
Imeko yasemva kokusweleka lixesha lokuphumla kunye nokuqhawulwa komsetyenzana wobomi ngaphambi kokuqala kobunye ubomi.
Ukuzalwa nokufa kukusa nangokuhlwa komphefumlo. Ubomi lixesha lomsebenzi, kwaye emva kokuba kufike ukufa kuphumla, ukwenza kwakhona, kunye nokuzonwabisa. Njengoko imisebenzi eyimfuneko yentsasa isenziwa emva kokuphumla kobusuku, emva koko umsebenzi wosuku, imisebenzi yangokuhlwa, kwaye ubuyela ekuphumleni, ke umphefumlo unxiba iimpahla ezifanelekileyo kwaye udlula kwixesha lobuntwana, ukubandakanyeka Ngomhla wokwenene womsebenzi wobomi, kwaye babekelwe ecaleni ngokuhlwa kokwaluphala, xa umphefumlo udlulela kuphumlo oya kuwulungiselela uhambo olutsha.
Zonke izinto ezizezendalo zibalisa ibali lomphefumlo ngemijikelezo yalo, ukuvela ngokutsha kunye nokuvela ngokutsha ebomini. Singayilawula njani le mijikelo, sinokuyikhawulezisa, sinciphise njani okanye siyitshintshe njani intshukumo yazo? Xa indlela ibonwa ngokwenene, ngamnye ufumana amandla akhe ukuyenza. Indlela yokucinga. Ngokucinga engqondweni yomphefumlo weza ehlabathini, ngenxa yokucinga ukuba umphefumlo ubophelelekile kwihlabathi, ngengcinga yokuba umphefumlo uyakhululeka.
Ubume kunye nokukhokela kwabo bacinga ukumisela ukuzalwa kwakhe, umlingiswa kunye nolwazelelo lwalo. Ingqondo yindibano yomzimba, iingcinga ezithi zithathwe kule ndibano zidluliselwe kwithuba lokubuya emva kwexesha elide okanye elifutshane ngelixa zimyili. Njengoko iingcinga ezenziweyo zichaphazela iingqondo zabantu bohlobo olufana nolo lwengcinga, ke ngoko babuyela kumyili wabo ukuze baphendule kuye njengoko bebenzile kwabanye. Iingcamango zentiyo, ukuzingca kunye nokunye okunjalo, kunyanzela umyili wazo ukuba adlule njengamava kwaye ambophe kwihlabathi.
Iingcamango zokungazingci, ububele, kunye nokufuna, zisebenza kwiingqondo zabanye kwaye, xa zibuyele kumyili wazo, zimkhulule kumakhamandela wokuzalwa okuphindayo.
Ezi ziingcinga zokuba umntu aqhubeke esenza iiprojekthi ezihlangana naye emva kokuba efile. Kuya kufuneka ezi ngcinga, azicime kwaye azonwabise, nganye kwiklasi yayo, emva kokuba yenzekile, kufuneka ibuyele kulomhlaba, esikolweni kunye nomhlohli womphefumlo. Ukuba kuthathelwa ingqalelo kwinyaniso, kuya kufunyanwa ukuba kukho amaxesha ebomini bakho apho iimood ezithile ziphindaphindeka. Amaxesha okudimazeka, ubumnyama, ukuphelelwa lithemba; amaxesha okugcoba ngovuyo kunye noyolo; ixesha lokufuna La maxesha makanikwe ingqalelo, ulwe notyekelo olubi, kwaye usebenzise amathuba afanelekileyo.
Olu lwazi lunokuza kuphela kwindoda eba 'nobulumko njengenyoka kwaye ingenabubi njengehobe.'